Warshadda Shiinaha ee Fasalka Gelatin iyo soosaarayaasha | Yaasiin
Gelatin wuxuu muujiyey kala duwanaanshaheeda codsiyada warshadaha dawooyinka iyo daawada. Waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo qolofka kaabsoolooyinka adag iyo kuwa jilicsan, kiniiniyada, kala soocida, suumanka bedelka daawooyinka, nafaqada / caafimaadka, sharoobada iyo wixii la mid ah. Waa mid si weyn loo shiidi karo waxayna u adeegtaa sidii daahan dabiici ah oo dawooyinka laga ilaaliyo. Sababtoo ah wacyigelinta caafimaadka ee sii kordheysa iyo baahida sii kordheysa ee alaabada caafimaadka, waxaa jira shuruudo sare oo loogu talagalay nabadgelyada gelatin iyo shuruudaha adag ee habka wax soo saarka. Taasi waa waxa aan had iyo jeer haysanno oo aan horumarinno.
Xoog Jelly Bloom 150-260Bloom
Nafwaayay (6.67% 60 ° C） mpa.s ≥2.5
Daahfurnaan mm ≥500
Wareejinta 450nm % ≥50
Wadarta Tiritaanka Bakteeriyada CFU / g ≤1000
E.Coli MPN / g Taban
Qulqulka Shaxda Soosaarida Gelatin
Gelatin wuxuu adeegsadaa habka dawooyinka ee dhammaan gelatin loo isticmaalo kaabsallada gelatin ee jilicsan, ha ahaadeen dawooyinka, nafaqada, qurxinta ama isticmaalka rinjiga-balooniga. Waxaan tixgelineynaa halkaa dalab si isku mid ah u baahan oo si taxaddar leh u xulan gelatin si loo siiyo awood isdaba joog ah.
Xarunta Gelatin R & D waxay sannado badan ku baranayeen dalabka gelatin kaabsalka jilicsan waxayna heshay khibrad la taaban karo iyo xallinta dhibaatooyinka, gaar ahaan ka hortagga isdhexgalka mid ka mid ah maaddooyinka firfircoon, ka hortagga saameynta gabowga, adkaanshaha iyo daadashada.
Kaabsallada adag, gelatin wuxuu ku siiyaa feyl xoog badan oo dabacsan foomka wax-ka-qabadka muuqda. Gelatin-kaan waxaa loo sameeyay in uu la kulmo xuduudaha adag.
Ka sokow muuqaalka iftiinka, shelf-nolosha ee wax soo saarka our waa ugu dheer ee Shiinaha; looma baahna in lagu daro wax walboo ka hortag ah oo macaamilkeena ah haddii Yasin Gelatin loo adeegsado deegaanka waxsoosaarka GMP.
Yasin Gelatin wuxuu la kulmaa heerka tayada ee xoog iyo gaar ahaan shuruudaha dawooyinka sida kuwa ay qeexeen USP, EP ama JP.
Kiniiniyada, Gelatin waa wakiil dabiici ah oo isku xidha, daahan iyo kala-goys ah oo buuxiya shuruudaha macaamiisha ay khuseyso isticmaalka walxaha kiimikada wax laga beddelay. Haduu kiniinku siiya muuqaal quruxsan iyo af fiican oo laga dareemayo.
Badanaa 25kgs / bac.
1. Hal kiish poly ah oo gudaha ah, laba bac oo leh tolmo wanaagsan.
2. Hal boorso oo gudaha ah, bac bacda Kraft ah.
3. Iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Loading Kartida ：
1. leh santuuqa: 12Mts loogu talagalay Weelka 20ft, 24Mts loogu talagalay Weelka 40Ft
2. la'aan sariirtaada: 8-15Mesh Gelatin: 17Mts
In ka badan 20Mesh Gelatin: 20 Mts
Fasalka Cuntada Gelatin